Pagels sparks Mzansi debate – DailyNews
By Staff Editor	 On May 29, 2013
HARARE – With Kaizer Chiefs having recently completed a league and cup double in South Africa, the continued omission from the Zimbabwe national team of Willard Katsande and Kingstone Nkhatha, both instrumental in Amakhosi’s dominant season, has torched debate across the Limpopo, according online publication KickOff.com.
Although Zimbabwe has not yet named its squad for its next set of assignments, Warriors coach Klaus-Dieter Pagels is resisting calls to include the Kaizer Chiefs duo of midfielder Katsande and striker Nkhatha in the team that will face Egypt and Guinea in next month’s World Cup qualifiers.
Chiefs coach Stuart Baxter considers Katsande “the best holding midfielder playing in South Africa” while Nkatha’s seven league goals makes a strong case for his inclusion in the Zimbabwe national squad.
But with Zimbabwe already out of contention for a place at next year’s World Cup – they are bottom of Group G with one point – Pagels has opted for younger, less-experienced players, mostly from the Castle Premiership.
:They were never instrumental at Chimps coz referees had a mandate to deliver the cups to nazoorena.Its pity they can’t call referees to national teams to assist.Katsende is the best holding MD in SA my a$$.” – Sports Writer
Zvorwadza’s political violence trial deferred